Igolide kukuphakama kwalo lonke ixesha | Ezezimali
Ngaphandle kwamathandabuzo, enye yeasethi yezemali esebenze ngokugqwesileyo kulo nyaka yigolide. Ikhuphuke yaya kwi-60%, yenye yezona ziphezulu kuzo zonke iimarike zezemali. Hayi ngelize, kwezi nyanga kunjalo usebenzisa ixabiso lokubalekela unikwe ukungazinzi ukuba iimarike zokulingana ziyahlupheka. Apho ikapitali yabatyali mali isiya kule ndlela yotyalo-mali. Ngenzuzo ephezulu kunaleyo eveliswe kukuthengwa kunye nokuthengiswa kwezabelo kwimarike yemasheya.
Ngaphakathi kwale meko ngokubanzi, igolide isenokuba nesakhono sokuphinda siyihlole ngenxa yamathandabuzo amaninzi aseleyo okusombululwa kuqoqosho lwamanye amazwe kunye nezinye iinyani zentlalo nezopolitiko. Njengomzekelo kunokwenzeka ungquzulwano lwemfazwe phakathi kweUnited States neIran kwaye oko kubangele ukuba ukanti igolide inyuke iye phezulu kwiimarike zamazwe aphesheya apho idweliswe khona. Enye yezona zinto zinenzuzo kakhulu kwezemali ngalo mzuzu kwaye apho imisebenzi inokulungiswa ngendlela efanelekileyo.
Ngelixa kwelinye icala, ayinakulityalwa ukuba igolide, njengesiganeko esingokwembali, iyabonakala kuba umda phakathi konikezelo kunye nemfuno ibiqinile kakhulu ukusukela ngo-1996. Intsilelo ziye zaveliswa. Ukuze ukuba kudlule iminyaka emininzi, iyakuphinda ibe lolunye lotyalo-mali olunemfashini phakathi kwabasekeli kwiindawo ezininzi zehlabathi. Phi, Iibhanki zingumnini we-20% yesitokhwe igolide eyaziwayo yehlabathi. Umthamo obaluleke kakhulu, kwimeko yokuqala ukubuyisela inxenye yegolide ebolekiweyo, unokugxininisa ngamandla ukunyuka kwexabiso le-ounce.
1 Igolide ithengisa ngamanqanaba ayi-1.400
2 Iinjongo ezilandelayo
3 Ungayithenga phi igolide?
5 Igolide ngokusebenzisa iimali ezithengiswayo
6 Iingubo zegolide ezityhidiweyo
Igolide ithengisa ngamanqanaba ayi-1.400
Igolide idweliswe apha amanqanaba eedola ezili-1.400 ngeyunce, yenye yezona ziphezulu kule minyaka idlulileyo kwaye ebangela ukuba iinkampani ezininzi ezincinci kunye naphakathi zijonge kwizikhundla zazo zokuthenga. Ngobuchwephesha obungenakulinganiswa bobuchwephesha kuba kuboniswe kwisitishi esikhuthazayo esijoliswe kuyo yonke imimiselo yesigxina: emfutshane, ephakathi kunye nexesha elide. Ukuqaphela ukomelela kwezikhundla zayo kwiimarike zezemali zeentsimbi ezixabisekileyo. Ngophawu lokuthenga olucacileyo ngaphandle koxabiso olunamandla kwisiqingatha sokuqala sonyaka.
Enye into ekufuneka ithathelwe ingqalelo xa uhlalutya isinyithi esimthubi kukuba sisixhobo esinamandla sokulwa nokunyuka kwamaxabiso. Ngokuchanekileyo ngamaxesha anje namhlanje apho le parameter ibalulekileyo yezoqoqosho iyaqala ukuvela. Ukunikezela ngembuyekezo kulondolozo olungafumanekiyo ngoku ngenxa yemveliso ephuma kuyo, zombini eziguquguqukayo kunye nengeniso esisigxina. Apho ubuncinci bokufumana inzuzo kungadluli kumanqanaba e-3% kwezona meko zintle. Ngayiphi na imeko, ingxaki enkulu xa utyala imali kwigolide ujonga iimveliso ezihlangabezana nezi mpawu zikhethekileyo.
Emva kokuvela kwayo kwiimarike zezemali, injongo ethi abahlalutyi bayikhombe le ntsimbi ixabisekileyo isondele kakhulu Iidola ezili-1.600 nge-troy ounce. Ngokukodwa ukuba ukungazinzi kuyaqhubeka kwiimarike zamashishini zamashishini zamazwe ngamazwe. Kuqheleke kakhulu ukuba ukuba ezi ziyawa, zikhatshwa sisikhombisi kwixabiso lesinyithi esimthubi. Ngaphandle kokunye ukuthathelwa ingqalelo kobuchwephesha bendalo kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko. Nokuba yeyiphi na, yinto yexabiso eliyimali ukuba ube kwipotifoliyo yakho yotyalo-mali kule minyaka imbalwa izayo.
Igolide, kwelinye icala, lutyalomali olukhethwa ngabatyali mali abaninzi nangakumbi. Ngenxa yembuyekezo ephezulu abayibonisayo ngalo mzuzu kwaye loo nto iyenza ukuba icetyiswe kakhulu Lungiselela ukonga ngendlela ekhuselekileyo nesebenzayo. Ngaphandle kwezilungiso ezisengqiqweni ezinokuthi zivelise kwiimarike zezemali. Ukuba baya kuba njengendawo yokungena kwizikhundla zakho kunokuthengisa. Ayisiyiyo kuphela igolide, kodwa zonke ezinye izinyithi ezixabisekileyo, ezinje ngeplatinum, isilivere okanye ipalladium uqobo. Zonke zikwi-uptrend ecacileyo ngasemva enceda ukuhambisa ukuthenga kwabo ngexabiso lemarike.
Ungayithenga phi igolide?
ILondon liziko lentengiso ebonakalayo yegolide kwihlabathi liphela. Yonke imihla, ezona bhanki zentsimbi zixabisekileyo (iibhanki zeebhionion) ziyavumelana ngexabiso apho ziya kwenziwa khona. Ixabiso lipapashwa kwiwebhusayithi yeLondon Bullion Market Association. Ixabiso lale mali ibaluleke kakhulu lihanjiswa kwiifandesi zemihla ngemihla. Ngale ndlela, kufanele ukuba kukhunjulwe ukuba ifandesi yexabiso yenzeka yonke imihla yokusebenza ngo-12: 00 ngegolide, ngo-14: 00 ngeplatinam nango-15: 00 ngegolide.
Ngokwahlukileyo, akukho xabiso lemihla ngemihla ngeempelaveki kunye neeholide ezithile zase-UK. Ukusuka kolu luvo, ukuthenga igolide kunzima kakhulu kunokuthenga kunye nokuthengisa izabelo kwimarike yemasheya. Ikwafuna imisebenzi eyenziweyo ngemali engeyiyo eyuro kwaye oko kubandakanya ezinye iikhomishini zotshintshiselwano lwemali aphakathi kwe-0,15% kunye ne-0,30% kwimali etyalwe kule ndlela yotyalo-mali. Ayothusi into yokuba igolide ayidweliswanga kwiimarike zemali zelizwe lethu. Ke ngoko, ayizukukhetha ngaphandle kokushiya imida yethu ukwanelisa eli bango likhethekileyo kutyalo-mali.
Ixabiso legolide kwimarike yaseLondon aligcinanga lutshintsho ebusweni besigqibo seFed kumazinga wenzala. Ngempembelelo eyahlukileyo kwiimarike zezemali ngelixa ukuthengisa kweemarike zehlabathi kwehla, isivuno sivela iibhondi zikwazile ukufumana kwakhona ngalo lonke ixesha. Ngale ngqiqo, ixabiso lesinyithi etyheli lifana nokunyuka kokugqibela ukuze kuthi onke amathuba aqale i-rally entsha yokuqhubela phambili. Yintoni enokuyithatha iye kumaqondo aphezulu nangaphezulu kunokuba kungoku kurhweba ngalo mzuzu. Nangona mhlawumbi oku kuxabisa sele kungaphantsi kobunzulu.
Kwelinye icala, kufanele kuqatshelwe ukuba ezinye iimali zotyalo-mali zinxibelelene ngokusondeleyo nale asethi yemali. Kodwa ngoncedo olukhulu olunokuthi zahlula utyalo-mali lwakho Kunye nezinye iiasethi zemali. Zombini ezivela kwii-equity kunye nengeniso esisigxina, kunye nakwimali, izindlu nomhlaba okanye ezinye iindlela. Njengokhetho kwimida yokungenelela ebuthathaka ebonelelwe kulo nyaka ngemali yotyalo-mali, nokuba injani na imeko yabo.
Igolide ngokusebenzisa iimali ezithengiswayo
Esinye isibonelelo sokuba abatyali mali abancinci nabaphakathi kufuneka bazibeke kwisinyithi esimthubi kungenxa yeemali ezithengiswa ngemali okanye ezaziwa ngcono njengee-ETFs. Kuba, sisinye sezixhobo ezisebenzayo zokuxhamla kudweliso lwakho kwiimarike zemali. Ngale ndlela, i-SPRD Gold Trust yenye yeefayile ze- eyona mali izinzileyo kwintengiso Kwaye ayibonanga lutshintsho lukhulu kwezi veki zidlulileyo. Ngeekhomishini ezinokhuphiswano ngakumbi kunasekuthengweni nasekuthengisweni kwezabelo kwimarike yemasheya. Kwaye kuzo zonke iimeko, ivumela ukuzibeka kweli xabiso lokusabela ngokugqwesa kwinqanaba lamazwe aphesheya.
Ii-ETFs, kwelinye icala, ziyimveliso ekhuthazwa kakhulu ukusebenza kwexesha elifutshane neliphakathi. Ngokungafaniyo neengxowa-mali ezijolise kwimigqaliselo emide ngokusisigxina. Ngelixa kwelinye icala, kwezinye iimeko zinokudityaniswa nezinye iiasethi zemali ezifanelekileyo ngokukodwa. Ngenjongo ephambili yokugcina isikhundla sethu kwiimarike zezemali ngaphezulu kwezinye izinto eziqwalaselwayo. Ukukhusela imali etyalwe kwasekuqaleni.
Iingubo zegolide ezityhidiweyo
Elinye lawona macebo amatsha kunye noqobo lokutyala imali kule ntsimbi ixabisekileyo kukusebenzisa imivalo yegolide. Yimveliso ephoswayo yaza yabunjwa ngobunono obugqwesileyo nangobungcali. Ubume bayo obumbeneyo kunye nokusulungeka kwegolide kuqinisekisiwe kwaye kutyalo mali olugqwesileyo kunye nolonwabo lweemvakalelo. Kulapho, ubunzima bezinto ezinyibilikisiweyo ezinikezelwa kwiimarike ziyahluka ukusuka kwi-100 gram ukuya kwi-1000 gram. Uluhlu olwahlukileyo lwezindululo ezihambelana nazo zonke iiprofayili zabenzi-zicelo. Njengenye yeendlela ezikhethiweyo zokuthatha ithuba lokunyuka kwamaxabiso kule asethi yemali.
Ngelixa kwelinye icala, sisixhobo esinokuzifumana ngaphandle kokuya kwiimarike zezemali apho zidweliswe khona. Ngenxa yesi senzo, sinako ugcine imali eninzi kwiikhomishini kunye nezinye iindleko kulawulo lwayo okanye kulondolozo. Kwaye ngesibonelelo esikhulu esinokuthi siyithengise ngexesha apho lo msebenzi ubonakala ufanelekile. Ukwazi ngamaxesha onke ukuba le asethi yemali ephantse inyuke ngexabiso, ubuncinci kwinto ebhekisa kwixesha eliphakathi nelide.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Igolide ejonge kumaXesha onke aPhakamileyo
I-ACS yomeleza indawo yayo kwimarike yaseSpain